DAAWO-Puntland oo faahfaahin ka bixisay sababah uu u baaqday shirkii maanta, natiijada kulamdii hore & qorsheheeda.
April 6, 2021 Xuseen 1
Puntlandtimes (MUQDISHO)-Waftiga ka socda xukuumadda Puntland ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyey shirarkii ugu dambeeyey ee ka qabsoomay Teendhada Afisyoone iyo baaqashada kulamadii loo balansanaa maanta oo Talaadi ah.
Afhayeenka madaxtooyada Puntland Jaamac Yuusuf Jaamac oo waraysi siinayey Idaacad lagu magacaabo Radio Garoowe ayaa waxa uu sharaxaad ka bixiyey sababaha keenay inuu maanta baaqdo shirkii loo balansanaa iyo natiijada kulamadii ugu dambeeyey ee madaxdu ku yeesheen Muqdisho.
Dhanka kalena, afhayeenka madaxtooyada Puntland ayaa waxa uu ku dheeraaday qorshayaasha xiga ee Puntland iyo natiijada ay ka filayaan inay ka soo baxdo shirarka hordhaca ah iyo kulamada guud ee looga arrinsanayo doorashooyinka Soomaaliya.
Safiirka Dubai u fadhiya xalane mr saciid Deni iyo Ahmed kinyaati shaqo fiican u,hayaa Dubai iyo kinya Qasaan Somali dantooda u hirgasho